साहित्य-सागर: July 2009
नेपाली साहित्य विश्व साहित्य भन्दा कम छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
♣ साहित्य सागरको मझेँरीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
-धन्यबाद । अबसर दिनु भएकोमा ।
♣ तपाईं अपरिचितहरु सङ्ग कसरी चिनिनु चाहनु हुन्छ नि?
-अपरिचित मित्रहरुसंग परिचित हुने माध्यम भनेको साहित्य नै होला ।
♣ तपाईंको प्रबासी जीबन कसरी चलिरहेको छ ?
-काम र साहित्यसंग जिन्दगीलाई हिडाईरहेछु, कहिले हाँसो कहिले आँसु, दु :ख सुख यस्तै छ।
♣ आफ्नो देश भन्दा धेरै टाढा अर्थात् भूगोलको अर्कै ध्रुब अमेरिकामा रहेर पनि नेपाली साहित्यको लागि मरिमेटी रहनु भएको छ ,हरेक नेपाली इन्टरनेट साहित्यिक पत्रीका त झन् दिलिप योन्जनमय देखिन्छ । यस्तो तपाईंको सिर्जनाको मुल श्रोत के होला ?
-संसारको कुनै कुनामा बसे पनि आफ्नो भाषा र साहित्यलाई जारी राख्दै, सायद जीबनमा केही नकमाए पनि नपाए पनि नाम चाहि बाँचिरहोस भनेर लागेको हुँ । मेरो सिर्जनाको मुल श्रोत चाहि मेरो अन्तर आत्माको चाहाना हो ।
♣ तपाई किन साहित्य क्षेत्र तिरै आकर्षित हुनुभयो ? कहिले देखि शुरु गर्नु भयो लेख्ने काम?
-मनको बह पोख्ने चौतारी ।नँया कुराको जन्म दिई समाजमा भएका राम्रा-नराम्रा कुराको भन्डाफोर गर्दै बिना बन्धन खुल्ला सिमाना भै बाँच्न पाउने क्षेत्र भएकोले म लागेको हुँ । म यस क्षेत्रमा २०४० - ४१ साल देखि लागेको हुँ ।
♣ कबिता र गजल बाहेक अन्य बिधाहरुमा तपाईंको उपस्थिती कस्तो छ ?
-साहित्य यात्रामा धेरै बिधामा नै कलम चलाईरहेको छु । म कथा, कबिता, गजल, भजन, निबन्ध, गीत, लोक गीत आदि लेख्ने गर्छु। मेरा थोरै मात्र रचनाहरु बिभिन्न रेडियो, एफएम, पत्रपत्रिकाहरुमा प्रशारण र प्रकाशित भएको छ ।हाल सम्म मेरो अप्रकाशित लेखहरु ७५० वटा छन् ।
♣ साहित्यलाई परिभाषित गर्नु पर्दा के भन्नुहुन्छ ?
-साहित्य भनेको सागर हो, जसको कुनै सिमा छैन, यसमा कुनै भेदभाव छैन, जस्ले जसरी पनि आफूलाई बिसाउन सक्छ। जिन्दगीमा लागेका राम्रा-नराम्रा अनुभबलाई पोख्ने खुल्ला चौतारी हो। साहित्य भनेको नँया-नँया फूल थरि-थरिको रङ र रुपमा फुलाउने सुन्दर बगैचा हो ।
♣ हाम्रो साहित्यको बर्तमान अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ? अहिलेको बदलिदो स्थितिमा साहित्यले कस्तो धार पक्रीनु पर्ला ?
-नेपाली साहित्य पनि अन्य देशको तुलनामा स्तरीय छ जस्तो लाग्छ । साहित्यको कुनै धार हुदैन । यो समय र परिस्थिति संग संगै बगिरहेको हुन्छ ।
♣ साहित्य लेखेरै बाँच्न सक्ने बातावरण छ त नेपालमा ? त्यहाँबाटको तपाईंको हेराइमा नेपाली साहित्यको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको स्थान कहानेर देख्नु भयो ?
-नेपालमा साहित्य लेखनबाट बाँच्ने आधार छैन होला । नेपाली साहित्य बिश्वको साहित्यसंग समान र एउटै स्तरमा छ । खालि अन्य भाषामा प्रकाशित हुन नसकेकोले हामी र हाम्रो साहित्य पछाडि परेको हो कि जस्तो लाग्छ ।
♣ अमेरिकामा नेपाली डायोस्परिक साहित्यको बारेमा केही भनिदिनुस् न । तपाई त्यहाँ कुनै साहित्यिक संघ संस्थासङ्ग आबद्द हुनुहुन्छ कि ?
-अमेरिकाको डायोस्परिक नेपाली साहित्यिक गतिबिधि बारे भन्ने हो भने यहाँ बस्ने बरिष्ठ साहित्यकार अनि लेखकहरुले आफूलाई यो क्षेत्रमा लामो समय देखि समर्पण गर्दै आएका छन् । हाल म कुनै साहित्यिक संघ संस्थासङ्ग आबद्द छैन । अस्टिन बासी साथीहरु मिलेर खोल्ने सोच छ । सबैको ब्यस्तताको कारणले ढिला भएको हो ।
♣ 'डायोस्परिक नेपाली श्रस्टाहरु समग्र नेपाली साहित्यको दह्रो खम्बाहरु नै हुन्।' यो भनाइसङ्ग तपाईंको कतिको सहमति छ ?
-मेरो सहमति छ ।यस कारण कि , नेपाली साहित्यको जन्म नै प्रबासबाट भएको हो ।
♣ तपाईंको लेखनी आदर्श कुनै साहित्यकारद्वारा प्रभाबित छ ? बाद र धार बारे आफ्नो मत ब्यक्त गर्नु परे कसरी गर्नु हुन्छ ?
-म खासै कोही साहित्यकारद्वारा प्रभाबित भएर लागेको होइन तर मलाई धेरै साहित्यकारहरुको सिर्जना मन पर्छ नेपाली होस् या बिदेशी । मलाई लाग्छ - साहित्य बाद र धारमा सिमित रहदैन । यो अनन्त फराकिलो छ ।
♣ तपाईंको कुनै प्रकाशित् कृतिहरु छन् कि ?
-मेरो प्रकाशित कृतिहरु 'मान्छेहरुको भिडमा' ( कबितासङ्ग्रह ) २०५०, 'आस्था खोजिरहेछु'( कबितासङ्ग्रह ) २०५८,'अनुपम'(गीतिसङ्ग्रह) २०५९ र 'अमुल्य' (गीतिसङ्ग्रह) २०६१ । मेरा गीतहरु ५० भन्दा बढी रेकर्डिङ् भैसकेका छन् । अब नयाँ गीति सङ्ग्रह र एल्बम छिट्टै प्रकाशित हुदैछ ।
♣ तपाईंको बिचारमा विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्यको पहुचता पुर्याउन के गर्नु पर्ला नेपाली साहित्यका श्रस्टाहरुले ?
-नेपाली साहित्य विश्व साहित्य भन्दा कम छ जस्तो मलाई लाग्दैन । खालि नेपाली साहित्यलाई बिभिन्न भाषा मार्फत बिश्व माझ फैलाए नेपाली साहित्यले पनि किर्तिमान राख्न सक्छ ।
♣ अहिले नेपालको नयाँ राज्य संरचनामा जनजातीहरु आफ्नो संस्कार र संस्कृतिको सुनिश्चित हुने गरी स्वायत्त राज्य निर्माणको निम्ति आन्दोलनरत् छन् । यस्तो परिबेशमा जनजाती साहित्यकारहरुले कस्तो भूमिका खेले उत्तम हुन्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ?
-जनजाती साहित्यकारहरुले अहिलेको अबस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका आ-आफ्नो ठाँउबाट निभाउनु पर्छ र निभाईरहेका पनि छन् । यस बेला सबै बिभेद पन्साएर जनजातीहरु एक भई आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गरीहाल्नु पर्छ । अहिले राजनीति भन्दा अलिक माथि उठेर जनजातीका नेताहरुले सोच्नु पर्ने बेला भएको छ ।
♣ तपाईंका प्रिय देशी बिदेशी साहित्यकार को-को हुन् र किन ?
-मलाई राम्रा कृतिहरु देशी बिदेशी सबैको मन पर्छ । सबैको फरक -फरक सोचाई अनुसारको लेखाई हुने भएकोले सबै साहित्यकारहरु उस्तै लाग्छ ।
♣ तपाईंका भावी योजनाहरु के छन् त ? कहिले स्वदेश फिर्दै हुनुहुन्छ ?
-छिट्टै गीति सङ्ग्रह र आधुनिक गीतहरुको संगालो पस्किने तयारीमा छु । म २०१० मा स्वदेश फर्कदै छु ।
♣ अन्त्यमा मैले सोध्न बिर्सेंको तर तपाईंलाई भन्न मन लागेको केही छ कि ?
-मलाई माया गर्नु हुने देश बिदेशका मेरो संपूर्ण पाठक मित्रहरु, शुभचिन्तकहरु र साहित्यकारहरुबाट थप सल्लाह सुझाब पाउने आशा राखेको छु । देशमा भईरहेको राजनैतिक समस्याको छिटै समाधान होस् , संपूर्ण नेपालीहरुले माया,ममता प्रेमका साथ बाँच्न हाँस्न पाऊन् । डर र त्राश भन्दा पनि नेपाली नेतामा देश बनाउनु पर्छ भन्ने भाबना जागोस् र नयाँ संबिधानमा हरेक जनताको हक अधिकार सुनिश्चित होस भन्ने कामना गर्दछु । भगवान बुद्दको उपदेश नेताहरुले अनुशरण गरी नेपाललाई बिश्वमा शान्तिको देश भनी चिनाऊन् यही कामना छ मेरो ।
Posted by डिआर निश्छल at 3:50 AM 8 comments:
तिमीलाई गीत बनाई शब्द शब्दमा लेखिदिन्छु
निदाउने बहानामा सपना तिम्रै देखि दिन्छु....
ओझेल हुन दिने छैन मनमा घाम नअस्ताए सम्म
टाढा हुन दिने छैन,तिम्रो साथ नपाए सम्म....
तिमीलाई प्रीत बनाई मनको फूलदानिमा सजाउछु
तिम्रो माया बरदान ठानी मुटुभित्र लुकाउछु....
निरश हुन दिने छैन,ख़ुशी चैन नपाए सम्म
मनमा अरु राख्ने छैन सत्य कसम नखाए सम्म....
Posted by डिआर निश्छल at 12:36 AM4comments:
Posted by डिआर निश्छल at 5:32 AM3comments:
तोक्चेगोला मुन्तिरको भीरकोटबाट सुँगुरको चारो खोजेर फर्कनेहरुले कोलडाँडाबाट स्वर फुलाएर कराए-'मामा केल्हो होइ…खाङबा टुबु सोक्ने वई..डोमा.!' गुँड फर्कने साँझ मुबुवा खोला थर्कियो । दुधको अगुल्ठा तानेर डोमा फरिकोलाई धकेलेर बाहिर निस्किइ र कम्मरमा हात लाएर उकालो हेरी र भुतभुताई-'काम न काज खोङग्रीले क्यान बोला'की हो ?'
महिना दिन तुप्चेको बेंसीगोठ स्याहार्ने डोमा अत्तालिएझैं चाम्रा कुर्कुच्चा बजार्दै उकालो हान्निई । कन्तीको कालो नाकको डाँडीमा पोतिएको छ । सत्र वर्षे पश्चिम फुच्चीको उकालो कुदाइले सोबु र ङिदार आसाङ्का टोकुवा कुकुरलाई समेत पछि पार्यो । 'क्यान.. के भो र ?' सासलाई जितेर आँगनबाटै सोमपुटी (आमालाई) उसले भित्रतिर सोधी ।
बेतको कुर्सीमा सुकिलो ज्यान गडधक्क पल्टेको छ । चिउँडोमा देब्रे हात कानका लोती सुनले टल्केका छन् । हातमा साइको फाइभ गोल्डेन प्लाइड घडी बिहानको साढे दश बजाउँछ । रेलिङ्गका बुकी र दुबो जमिनतिर नुहिएका छन् । तारबार गरिएको घर माथिको खुला आँगनमा बच्चाहरु क्रिकेट खेलिरहेका छन् । बतासेमा कराएको रेलको डब्बा सोझै सुनिएको छ । अघिल्तिर तल पुलबजार घामले तिर्मिराएको देखिन्छ । लोधोमा खोलामा पौडी खेल्न एक हुल अल्लारे गाडीबाट ओरालिएका छन् । गंगामाई जलबिहार गर्नेहरु एक हुल फर्किसकेका छन् । अप्रिल २१ तारिख आज ऊ फ्ल्यास्ब्याकमा छे र पल्टिन्छे सुदुर पछिल्तिर । पैतीस साल माघ १७ गते । सोलुखुम्बुको तोक्चेगोला शेर्पागाऊँ । जहाँ ऊ रैथाने थिइ सत्र वर्षसम्म । फ्ल्यास्ब्याक …।
'दोछिरीले एउटा कुरो ल्या'को छ वई…क्या भन्नु मो त……' निकै बेरपछि सोमपुटीले भर्खरै मदेशबाट आइपुगेको जेठो छोरोलाई देखाउँदै भनी-'दोछिरी तोइँ भन्दै…के भन्नु मो त…।' सबै गम्भीर देखिए । डोमाको अनुहारको किन्चित डर र जिज्ञासालाई माझमा पुर्याउँदै दोछिरीले भन्यो-'डोमा तो आज देखि बेंशी बस्नुपर्दैन ।' बाउले आधी बैंशैमा मास छरेपछि दोछिरी रेखदेखको अगुवा थियो । उसले डोमाको प्रतिक्रिया अगावै कुरा थप्यो-'तोइले बिहा गर्नुपर्छ ।' डोमा हाठात् हतास देखिई र रुन कराउन थाली-'मो तिमेरुको लागि बोझ भएँ होइन ? मलाई काँहा बेच्न लाग्यौ म अचेल बिहा गर्दिनँ भनेको होइन ?' ऊ रुदै खोल्मातिर दौडिई ।
'केटो त राम्रै छ वइ…।' बेलुकी दोछीरीले भन्यो-'नेपालपारीको रिपुधन (मालिक) को घरमा धरानमा काम गर्छ । तोइले बिहा गरिस् भने मलाई जागिर दिने अरे…।सोमपुटी कुनातिर फर्केर सुक्क-सुक्क गर्न थाली । डोमाको आँखा पाकेको अकबरे खोर्सानी झै देखिने थकित थिए । दोछिरीले भन्यो-'भोलि बेहानै तो र म धरान जानुपर्छ ।' डोमा रातभरि सुत्न सकिन…'पच्चीस वटा भेडासँगै सुत्ने उसको ओछ्यान बेंशींमा उठाकै छैन…सुँगुरको चारो खोज्दा झाक्रीथुम्कामा छोडेको एक रुपेको बाँसको काईँयो ल्या'कै छैन…तिनचुलेको पसलमा रिबन किनेको पाँच रुपे तिर्न बाँकी छ…।गोरखपुरे र गोठबारी निम्जाले खाएको आरेकको ६ रुपे उठाउनै बाँकी छ…।रातु गाईले उसलाई मात्र दुध दिन्छे । दोभानेमा पासाङ्ग फूर्वा र च्याङलामुले आलु उसिनेर ल्याउँथे…ठेरेङबारीमा भेडा जन्मिदा पटुकामा बेरेर छतौरो उसैले ल्याएकी हो…कल्ली भेट्टाई दिएकाले दोलाकीले एक रुपे देकी थिई …।' आधारातमा अगेनामा झोक्राएकी आमासँग डोमा बेस्सरी रोई -'आमा म तिम्लाई कसोरी छोड्नु वई…।'
उज्यालो भयो । सोमपुटीले ढिके नुन खन्याएर खाली बोराभरि कपडा राखी र पलाष्टिमा सुठुनी र भोटे पिरालु पोको पारी र सबैलाई कुम्लोमा बेरी । देसानमसान नलागोस् भनेर हर्दीको सानो पोको कुम्लोमै राखी । इण्डियाबाट ङिमपुतर आउँदा दिने भनेर राखेको खुर्पा पनि डोमालाई राखी । सोमपुटीले डोमालाई आँखा छोपेर भनी-'राम्ररी जा वोई…।' डोमा डाँको छोडेर खुट्टा उफार्दै रोई । सोमपुटी छानामा झुण्डिएर डोमालाई नहेरी रोइरही । रुँदै डोमाले कटुसको पातमा बेरेको एक झुप्पा बिंडी झिकेर सोमपुटीलाई दिई -'ला…तिमी खाऊ…।' दोछिरी र डोमा खोल्मामाथि निस्किए । डोमाले आफूले रोपेको तरवारी फूलको एक थुंगा टिपी र नाडीले आँखा पुछेर दोछिरीको पिछाडि लागी । माझाघरे साङ्गेले आँगनमाथि जैफूलको बोटमा निस्केर दोछिरीलाई भन्यो-'बोइनीलाई बेचेर चैं नखा..अरु त क्या भन्नु र…? साङ्गेले आँखा चिम्सो पार्दै सोमपुटीलाई भन्यो-'आबो डोमाले जस्तो आरेक कल्ले बनाउँछ र…?'
ऊ चस्मा फुकाल्छे र मुन्टो फर्काएर रेल स्टेशन माथिको जापानीज टेम्पलतिर टक लगाउँछे । उसको मुद्रा अमिलो देखिन्छ । टोड्के पारी देखिने रिम्बिक र पारीपट्टिको सिक्किम वरपरका गाऊँ तोक्चेगोलाझै लाग्छन् उसलाई । उसको चिउँडो अब दाहिने हातमा सर्छ ।
अग्लो घर भूईँतलाको केही नओछ्याएको खाटमा डोमा बसेकी छे । पाँच दिन हिँडेर धरान झरेको डोमाको बोलोजभरि पसिना र मैलाका धर्काहरु छन् । भुक्के चप्पलले कुर्कुच्चा पिट्दा-पिट्दा र हिड्दा-हिड्दा खुट्टा खोच्याउने भएका छन् । उसको घाँटीमा झुण्डिएको साँचो सेमपुटीलाई दिन भुलेकी छे उसले । पाँच दानाको प्वाँलो उसको घाँटीमै छ । उसलाई डर लागेको छ-'दोछिरीले कस्तो घरमा ल्या'को वई..मलाई…?'
एक खाइलाग्दो र अग्लो केटो बाहिर निस्कियो र डोमालाई वरिवरि घुरेर हेर्यो । डोमालाई डर लाग्यो र आफ्नै मनसँग कुरा गरी-'आब्ब्ब्बुई…!' उसले सोची-'मेरो पोइ यै होला…। ऊ कताकता धेरै डराई-'यत्रोसँग कसोरी सुत्ने ? आबुई…।' एकछिनपछि अर्को मझौला केटो निस्कियो र फरि डोमालाई हेर्न थाल्यो । डोमा अब दोधार भई र खाटमा खुट्टा हल्लाउँदै बसी । मुटु ढुक..ढुक चल्न थाल्यो उसको । एकछिन पछि दुइटा केटी टाँडबाट झरे र भाउजु र माइजु भन्दै तल्लोपट्टि कोठातिर डोमालाई लगे । डोमाले बोल्न जानिन । चारपाटे साबुन र सेतो तौली दिएर उसलाई नुहाउन अह्राए । नयाँ पेटीकोट,लुङ्गी र बोलोज लगाइदिए । डोमाले सोची-'मेरो पोइ कुन चाईँ होला..?' उसले कसैलाई सोध्न पनि सकिन ।
अर्को दिन धेरै मान्छे भेला हुन थाले । दोछिरीले भन्यो-'आज तेरो बिहा हो ।' एकछिन पछि उसले जुवारीकोट र कटनको सुरुवाल र गम्बुट लगाएको अर्कै मान्छेलाई सिढीँको कोठामा राडीमाथि बसेको देखी । उसलाई डाँको छोडेर रुन मन लाग्यो । सोमपुटीलाई उसले बेस्सरी सम्झी । मन-मनमा क्वाँ-क्वाँ रोई र आँखा निरन्तर चिपचिपाई । दोछिरीले पनि आँखा मिच्दै भन्यो-'नरो डोमा..क्या गर्छस् ?तेरो जातै यस्तो । डोमाले कसैलाई हेर्न सकिन तर धेरैले उसलाई टिका लगाइदिए । दोछिरीले चाहिँ टिका लगाएर उसलाई काँधमा समाएर भन्यो-'डोमा सुखी हुनु होइ…।'त्यतिबेला दोछिरीको आँशु थालीमा परेका थिए ।
लेबोङमा आर्मीहरु परेड खेलिरहेको आवाज मधुरो उसको कानमा कता-कता सुनिएको छ यतिबेला । मिलन बस्ती मूनि कमसिरी चिया कमानमा बौद्धहरुको समाधीस्थलमा बालिएको केराको मुढाको धुँवा एकनासले आकाश थुरिएको छ । फ्ल्यासब्याक कन्टिन्यू…।
बिहाको रात होचो, भु्क्क परेको उसको पोइ बोल्दै बोलेन । डोमा सुत्न डराई र भित्तापट्टि खाटमा टुक्रुक्क बसिरही । उसको पोइ उसलाई हेर्दै घरि उठ्दै र सुत्दै ननिदाइकन छटपटाइरह्यो । मध्धे रातपछि उसको पोइ बोल्यो-'डे..मा !' अब डोमालाई झन् डर लाग्यो र समालिएर बसी । भाले बास्ने बेलामा डोमा भित्तातिर फर्किएर गुजुल्टिई । उसको पोइ उठेर खोक्दै र छटपटाउँदै बस्यो । रात त्यतिकै बित्यो । उसको पोइसँग सिस्नो टिप्दै एक हप्ता सर्दु सिरानमै बित्यो डोमाको । एक हप्ता पछि मात्र उसको पोइको बारेमा उसले अलिकति बुझी । उसको पोइ घरको सबसे बडे इमान्दार कर्मचारी थियो । रिपुधनका सबै सुँगुर कुखुरा उसको स्याहारमा खुब सप्रेका थिए । संखुवासभाको चेपुवाबाट मधेस झरेपछि निमदोर्ची भोटेले भाग्यले त्यहाँ काम पाएको थियो र ऊ आज डोमाको पोइ भएको थियो । एक हप्तामा निमदोर्चीले डोमालाई सेउतीको बगरमा अप्ठेरो गरी भन्यो-'डे..मा.. उसले बल निकाल्यो-'बच्चा जन्माउने गरी आज ता सुतुङ होइ…। डोमा बिस्तारै भिज्न थालेकी थिई । उसले भनी-'मलाई ता आउँदैन के गर्नुपर्ने हो ।' यति भनेर ऊ अर्कैतिर फर्किइ र मुख छोपी । त्यो रात दुवैले सुत्न जानेनन् । डोमाले भनी-'आइया…!' निमदोर्चीले भन्यो-'कस्तो अप्ठेरो पो हुँदै र'छ ।डोमा जुरुक्क उठेर समालिई ।
दश दिनपछि दोछिरी आएर डोमालाई भन्यो-'मैले फाराममा जागिर पाएँ । तोलाई राम्रै छ होइन..?' डोमाले 'अँ' मात्र भनी । दोछिरीले जागिर पाएकोमा मात्र पनि ऊ धेरै खुशी भई । दोछिरीले जागिर पाउने भएकैले उसले थोरै मन बेशीं छोड्ने मन लगाएकी थिई । दश दिनसम्म पनि कसैले बिडीँ नखाएको देखेर तोक्चेगोलादेखि ल्याएको लामपाते सुर्ती उसले बारको पल्लोपट्टि भोगटेको झाडीमा फालिदिई । गाउँको यादमा महिना दिन मनमनै रोएकी डोमाले एकदिन दोछिरीलाई भेटेर भनी-'मेरो करिमै हो,तो सँग के को गुनासो..?'
छतको टौवामा भँगेरा र भँगेरी फुर्र उडेर बसेका छन् । ऊ समानान्तरमा मुद्रित छे । जीवनमा उसले धरान छोडेको पनि तीसौं वर्ष भयो । तोक्चेगोला छोडेको झन कति धेरै वर्ष र ऊ बसेकी छ सीमानापारि । उसले देखेकी छे तेन्जिङ्ग रकको कापमा ठिटाठिटीहरु च्वाप्प-च्वाप्प 'किस' खाँदै मुख-मुख मैथुन गरिरहेका चौरस्ता त्यसको पछाडिको महांकाल डाँडो र नाइटिङ्गेल पार्कतिर विनासंकोच एक अर्काको छाती रगड्दै लठारिएका बैंशालुलाई उसले आँखापुग्दो हेरेकी छे । छोराछोरीहरु बेलुकै पिच्छे ब्वायफ्रेण्ड र गर्लफ्रेण्डको कुरा गर्छन् । ऊ आफ्नो कर्मको खेलले भोगिल्या'को समयलाई चटक मानेर छतबाट उत्तर फर्किएर अमुकदर्शक हेरिरहेकी छे ।
'तिमरुदेखि म खुशी छु ।' रिपुधनले हङकङ्ग जानुअघि निमदोर्ची र डोमालाई छाताचोकमा भन्यो र निमदोर्चीलाई धाप दियो-'छोरै सम्झेर मैले तिम्रो बिहा गर्देको हो मैले ।' निमदोर्चीले शिर झुकायो । 'आबो तिमरुको लागि मैले सोचेको कुरा के भने॥' रिपुधनले दोहोर्याएर भन्यो-'सोचेको कुरा के भने… मेरो दार्जेलिङ्गको घरलाई तिमरुले सिहार्नु…।'
तीन सालपछि रिपुधनले हङ्गकङ्गबाट तार गर्यो-'म तिमरुलाई त्यो घर जिम्मा लाउन आउँदैछु ।' त्यसपछि ढुक्कले शुरु भयो निमदोर्ची र डोमाको जीवन सिङ्गामारीको घुम्तीमुनिको पहारिलो मिलन बस्तीमा ओस्याइलो जिन्दगी । १९८४ मा डोमाले भुँडी बोकेकी थिई । त्यतिबेला गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्केको थियो । उसले छोरो त्यै साल जन्माई । चालीस दिनसम्म शहरमा कर्फ्यू लागेको थियो । कोही पनि बाहिर निस्कन सकेका थिएनन् । औरत र केटाकेटी मात्र घरमा बस्थे पुरुषहरु कमानका बुट्यानतिर दिनभरि लुकेर बस्थे । गोलीले कसै न कसैका घरका कुनै न कुनै झ्यालका सिसा छेडेको थियो । बिद्रोहीले मिलनबस्तीको फेदीका सबै घरमा आगो लगाएका थिए । पछि सुबास घिसिङ्गले सबैलाई त्यहाँ पुनःस्थापना गरायो र गाऊँलाई सुवास ग्राम भनियो । एकदिन सिआरपी सेना ढोका फोडेर भित्र पसे । उनीहरुले डोमालाई जिस्काए-'कित्ना चेहेरावाल मासुम हे मुझे देना ।' डोमा थरथरी कामी र बच्चालाई छातीमा पोको पारेर कुनामा धसारिइ । निमदोर्ची पछाडिको झ्यालबाट भित्र पस्यो र कुकुरमा सुईसुई भात पकायो र डोमालाई खान दिएर त्यतैबाट भाग्यो । डोमाले भोलिपल्ट घरमाथिको तेश्रो बाटोमा काटिएको मान्छेको टाउको र खुट्टा किलामा झुण्ड्याइएको देखी । टावरमुनिको घरबाट रसबिला बाहिर के निस्केकी थिई जीवनभर कुँजो हुने गरी उसको मेरुदण्डमा गोलीले छेड्यो ।
डोमा जर्याकजुर्युक उठ्छे र जीऊ तन्काउँछे । घाममा बसेकोले तिरिङमिरिङ आँखाले उसले आफ्नो उन्चास वर्षे खाइलाग्दो जीऊ र चिटक्कको तीन तले घरलाई छतबाट फन्को मार्छे । पुस्तकालय छेऊको कौशीमा कान्छो छोरो आयाम वरिपरिका केटाकेटीलाई कम्प्यूटरमा दार्जीलिङ्ग देखाउँदैछ । सेन्ट मारिज कलेजबाट भर्खरै कुक रिटायर्ड निमदोर्चीको पेन्सनले बाहिरपट्टि सिलीगुरीदेखि ईँटा मगाएर किचेन बनाइएको छ । पाहुनाको एउटासहित गाडी अड्ने ग्यारेजको लागि डोमाले मान्छे बोलाएकी छे । ऊ छतको बारमा अडेसो लाग्छे र दुवै हात बाँधेर पारि अलि उकालो हेरिरहन्छे । हिऊँपात र हुण्डरीले मुर्झाएको तर हाँसिरहेको काचनजंघा उसको आँखामा ठ्याक्कै छापिएको छ । ऊ आँखा मिचेर र टकटकाएर पालैपालो फेरि हेर्छे नियतिले हलचल गर्न नदिएको कंचनजंघा र नियतिले नै स्थिर बन्न नदिएको लोधोमा खोला । दार्जीलिङ्गको न्यानो घाम सबैलाई प्यारो छ । ऊ कम्प्युटर कोठातिर झर्छे । डोमा फ्ल्यास्ब्याक ..... ।
Posted by डिआर निश्छल at 4:49 AM 1 comment:
Posted by डिआर निश्छल at 12:41 AM 1 comment:
Posted by डिआर निश्छल at 12:35 AM 1 comment:
अब कसैसँग मायाप्रीति लाउँदिन म
तिम्रै लागि मठमन्दिर धाउँदिन म ।
गयौ टाढा मुर्छा पारी मुटुमा छुरा धसी
रुँदै-रुँदै दौडिदै तिम्रो पछि आउँदिन म ।
एकैछिन रमाएनि घातक हुँदो रैछ माया
प्रेम-पत्र पढी अब कहिले पनि रमाउँदिन म ।
लुक्दैभाग्दै हिड्छौ तिमी 'गगन' भन्दा माथि
मेरै अघि हिँडे हुन्छ झुक्किएर नि समाउँदिन म ।
हाल-अनेसास यूएई च्याप्टर
Posted by डिआर निश्छल at 12:11 AM 1 comment:
Posted by डिआर निश्छल at 11:56 PM 1 comment:
अक्करको त्यो यात्रा
हेर्दै दिक्क लाग्ने
कतै नाक ठोक्किने उकालो
कतै हेर्दै खुट्टा काम्ने ओरालो
पाइला पाइला गनेर
त्यो अक्करे यात्रा
गर्मिमा घाम्ले पोल्दा , न सितल छहारी
आत्मा तिर्खाले आत्मा ब्यकुल बन्दा
प्यास मेट्ने न कुवा
उजाड मानब बस्ती बिहिन
ढाकरहरु बोकेर हिंड्नै नमिल्ने
टेकुवा टेकाउनै नमिल्ल्ने घुम्तिहरु
यस्लाई अब अली कती फराक बनाउनै पर्छ
दोहोरो ढाक्रेहरु हिंड्न मिल्ने
टेकुवा टेकाउन मिल्ने
त्यही गल्लीलाई छेउकुना खोस्रियर
ढुङ्गाहरु पन्छायर फाले भाई हाल्छ नि
कहाँ मैले बाटो नै परिवर्तन गरौ भनेको हुँ र ?
सिउडिको रुखहरु फालेर
सितल दिने वर पिपलहरु रोपौ मात्रा भनेको हुँ
सिउडिले न सितल्तानै दिन्छ
न कुनै कन्दमुल
प्यास लाग्दा तिर्खा मेट्ने कुवाहरु खनौ
अनी थकाई लाग्दा थकाई मेट्ने फलैचाहरु बनाउ
मात्र भनेको हुँ,
त्यो अक्करे यात्राहरुमा बास , गास र कपास
नमिल्न पनि सक्छ
कठाङ्रिने ठन्डी या प्रचन्ड गर्मिहरुमा
तर हतोत्साही नभै
अगाडि बढोउ मात्र भनेको हुँ
आमको दुध नसुके सम्म यो छातीमा
आदम्म्य साहस् अनी द्रिढ सन्कल्प
हुनेछ पुरा गर्ने अक्करे यात्राहरुलाई
चोइटिन्दैना खिइन्दैना पाइतलाहरु
बरु धुलिनेछन गल्ली र गोरेटोको धुलोहरु
यस्तै बाटोहरु निर्माण गर्नु पर्छ
जहाँ बिबेक हिन र निमुखा प्रानीहरु पनि
स्वोतन्त्र अनी शान्तिले हिंड्न सकुन
बाघ भलु नलागोस
अनी ठाउँ ठाउमा कुवाहरुहोस्
अनी सितल दिने वर छायाहरु
जहाँ हरेक आमाहरुले तिर्खा लाग्दा
धित मरुन्जेल पानी पिउन
जहाँ हरेक बाबुहरुले
थकाई लाग्दा छहारिमा सुस्केरा हालुन
हिमालको चिरैतो , यार्सगूम्बा , पाखान्बेद अनी
हाड्जोर्नि र माझितो कुरिलोहरु
तरै पुगुन र
तराइको नुन चामलहरु हिमाल पुगुन
अनी त हरेक यायावरहरु आफ्नै देश फर्किने छन
मुक्ती कामी हातहरु
अक्करे यात्राको गोरेटो निर्माणमा जुट्नेछन्
मात्रै त भन्न खोजेको हुँ मैले ।
Posted by डिआर निश्छल at 11:28 PM 1 comment:
-राज लम्साल 'यात्री'
तिमी कस्ती भयौ होला सिन्दूर पोते लाउदा खेरी
एकै पटक हेर्ने मन थियो तिम्रो तिर आउँदा खेरी
मन राम्रो रुप राम्रो तिमी त्यसै चन्द्र जस्ती
कति खुशी भए होलान् उनले तिमीलाई पाउदा खेरी
तिम्रो वरिपरि सधैं जाही जुही फुल्छन् भने
हरेक बिहान तिम्रै नाममा मैले मन्दिर धाउदा खेरी
यती ठूलो संसारमा एउटै तिमी मिल्ने मान्छे
अझै पनि सुन्ने गर्छौ मैले गजल गाउदा खेरी
Posted by डिआर निश्छल at 11:11 PM 1 comment:
Posted by डिआर निश्छल at 10:37 PM 1 comment:
Posted by डिआर निश्छल at 10:13 PM 1 comment:
बरै भन्ने कस्ले
तिमी बिना बाँचु भन्दा,कुरा काट्छ सबले
एउटै मुटु दुइटा हुँदा, बरै भन्ने कस्ले ।
कसम यियो सात जन्मको,धोका दिइस् भन्छे
तिमी बिना मर्छु भन्दा, नाटक गरे रे मैले
मलाई दुख्दा रुन्थी पैले,हाँसी हिड्छे अहिले
तिमी मर्दा म नि मर्छु, गर्थी रोई बाचा
एक्लो भए साथ माग्दा, हा..हा हाँस्छे आज
दु:ख पिडा बाड्छु भन्नेले,कॉँडामा उनी अहिले
Posted by डिआर निश्छल at 1:42 AM 1 comment:
Posted by डिआर निश्छल at 12:53 AM 1 comment:
रिमोटको अन बटन
तब तु हाजिर भयो
रङ्गमंचमा रोबोट ।
पहिलो बटन थिचियो
र रोबोटले सिउरियो-
शिरमा श्रीपेच ।
दोस्रो बटन थिचियो
र रोबोटले बोक्यो-
पिठ्यूँमा बुट ।
तेस्रो बटन थिचियो
र रोबोटले गायो-
'हमारा भारत महान् ।'
आतुर छन् दर्शकहरु
कहिले पड्किएला ?
स्टेजमा एम्बुस ।
Posted by डिआर निश्छल at 9:43 PM 1 comment:
Posted by डिआर निश्छल at 9:16 PM 1 comment:
स्वर्ग झैं लाग्छ
स्वर्ग झै लाग्छ, यो देश मेरो, देशकै माया छ
विश्वमै अग्लो, यो शीर मेरो, विश्वमै नाम छ ।
पहाड़ र पर्बत, झरना र खोला, सुन्दर शान्त बन
विश्वमा शान्तिको, उपदेश दिने, बुद्धको आफ्नो घर
खेले र हुर्के, भिर र पाखा, त्यै देशको माया छ
बिरको सन्तान,विश्वलाई जित्ने, बिश्वास हाम्रो छ
देशको लागि, रगत दिन, नेपाली तयार छ
डाँफे र मुनाल,दौरा र सुरुवाल, देशकै पहिचान छ
विश्वमै अग्लो, यो शीर मेरो, विश्व मै नाम छ ।
Posted by डिआर निश्छल at 8:53 PM 1 comment:
-दिपा एवाई राई
यो द्रौपदीको प्रणाम ।
जंगल र तालहरूमा
कृष्णले भारी सभामा मेरो
वस्त्र हरण हुन दिएन
र भारी सभालाई चुनौती दिँदै
प्रदर्शित हुन चाहान्छु ।
दुस्सासनले मलाई नङ्ग्याएन
यो सय गजको धोती र पेटीकोटले
आजसम्म बटारिरहेको छ
जीवनका मूल्यवान समय
यस महामानवहरूको सभामा
विद्रोह गर्न चाहान्छु ।
म द्रौपदी तुरुन्तै
सीमारेखासम्म नाङ्गिन चाहान्छु ।
मेरो वस्त्र हरणको समयमा
युधिष्ठिरको सत्यवादी आत्मा
विदुरको मौन नीति
धृतराष्ट्रको पुत्र मोह
गान्धारीको पति प्रतिज्ञा
र सकुनी मामाको षडयन्त्र
हृदयदेखि धन्यवाद छ ।
मेरो अस्तित्वको कवज
मेरा पाण्डव पतिहरु
मलाई नै दाउमा राखेर
सिद्ध गरिरहेको बेला
स्वयँ म महाभारतको
यस सभामा खडा भई
नाङ्गिएर ढुक्क हुन
र बनाउन चाहान्छु
लोभ र स्वाभिमानको अगाडि
मेरो नग्नताको पर्दा खोल्न चाहान्छु ।
अपुरो वस्त्र हरणले
म निसास्सिएकी थिएँ
र वस्त्रले बेह्रेर मलाई
बलात्कार गरिएको थियो
योनीछेद गरिएको थियो
जताततैबाट लैङ्गिक आक्रमण गरिएको थियो
म वस्त्रभित्र कुँञ्जिएकी
निरीहताले जलेर राख भएकी
यतिखेर आगोमा दनदनी बलिरहेकी छु ।
आँखा खोलेर हेर,
म कसरी ‘दक्षप्रजापति’को अघि
जलिरहेकी छु !
धृतराष्ट्र बोकेर हिँड्छौ ?
मेरो विप्लव सुन्यौ होला,
यहाँ उपस्थित सबै-सबैलाई
म नाङ्गिएर प्रणाम गर्दछु !!
नाङ्गी द्रौपदी ।
Posted by डिआर निश्छल at 8:30 PM2comments:
सपनी नराम्रो देखेँ तिमी रोयौ कि कतै
मध्यरातमा मैले जस्तै गरी फोटो छोयौ कि कतै
अन्धकार छ निल गगन दिनमै पनि आज,
परेलिको गाजल आँशुले धोयौ कि कतै
सन्देश बोकी आउने पवन मौन मन्द देख्छु,
परिस्थितिको पिजडामा तिमी पर्यौ कि कतै
अन्योलमा अन्तरआत्मा तड्पिएको छ अति,
मलाई एक फेरा नसम्झी आत्माहत्या गर्यौ कि कतै
Posted by डिआर निश्छल at 8:06 PM 1 comment:
जे जस्तो छौं
कर्मानुसार जो बन्दैछौ
त्यसमा चित्त नबुझाउने
दोश्रोको देखासिखिमा आफूलाई
उस्तै बनाउन असफल प्रयास गर्ने
बन्न नसकेको झोंकमा
आफ्नै हविगतमा पुर्याउन
तरकीव सोच्ने / व्यवधान निम्त्याईदिने
स्वार्थमा हमेशा लत्पतिएर
आफ्नो पहिचान हराएको पत्तै नपाउने
स्वाभिमानलाई बन्धकी राखेर
कसैको मुलाहिजा गर्नमा
दिए जति फुर्किएर थाप्ने
पाए जति गुट्मुटाउने
बहानाको छेक थुन गरी
आफ्नो सर्वस्व सुम्पिनु परे जस्तै गर्ने
बेतालमा पनि ताल खोज्ने
खै! कहाँ केही नमिलेको
जहाँ जता रहे पनि
स्वार्थ र हठको पोको बोकेर
सम्बन्ध जोडे जस्तो गर्ने
सम्बन्ध तोडे जस्तो गर्ने
कुनै पनि नौटंकीको पात्र बन्न खपिस
आफै बकम्फुस भएको
कसैले ठह्र्याई दिनुपर्ने
कहिले लाज पचाउने
कहिले आत्मा सम्मान गुमाउने
अकड,बुद्धुको पहिचानमा रुमलिने
केही नभएको जस्तो इमान्दारी
स्वाभाविक बने जस्तो आडम्बरी
दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउनलाई
आफ्नो तारिफ आफै गर्दै
आफूलाई महान कहलाउन चाहने
विवादै-विवादमा मुछिएर पनि
जे गर्न नि नहिच्काउने
थोरै फाईदामा बेफिक्री
आफ्नो लीलाम आफै गर्ने
साह्रै उल्टो बुद्धिमानी
आफ्नो असफलताको दोष लाञ्छना
धमिलो पानी भन्दा शुद्ध हुन खोज्ने
झण्डै र अलिकति वहाँनामा
आफूलाई सर्वोत्तम ठान्ने
जताततै जो कोही सदैव चुकिरहने
थाहा छैन कहिलेसम्मलाई
खै! के किन नमिलेको
Posted by डिआर निश्छल at 10:36 PM No comments:
-सञ्जय राई 'छुच्चा'
एउटा फूल झरिगयो
ओईलाई मेरो बिन्ती
एउटा जुन डुबिगयो
टोलाई मेरो बिन्ती
भुल्नेहरुलाई भुल्न झन गाह्रो
सम्झनाको संसारमा जिउन झन साह्रो
एउटा माया मरिगयो
लुटाई मेरो बिन्ती
आउछु भनी जानेलाई भेटन झन गाह्रो
एक्लो आत्मा सम्हाली जिउन झन साह्रो
एउटा मन भाची गयो
टुटाई मेरो बिन्ती
एउटा जुन डुबीगयो
हाल: धरान, सुनसरी
Posted by डिआर निश्छल at 10:19 PM No comments:
तिमी आउछौ भनेर
मुसुमुसु हाँसी दिन्य्थौ
देउराली अनि चौतारीमा भेट्दा
पहिलो भेटको मुस्कान
अझै अमर छ
सपनी अनि बिपनीले
सोधिरहन्छ ...... खोजिरहन्छ ......
पागल झै भए
धेरै वर्ष तिमी नआउँदा
स्वर्ग जस्तो मेरो बस्ती
उराठ उराठ लाग्छ
दिन दिन भरी सगै गएको गीत
जन्म जन्मको प्रित झुटो झै भा छ
सँगै जिउने सँगै मर्ने बाचा
कथा झै भा छ
कतै फर्की आउँछौ कि भन्ने आशमा
बाटो भरि सप्तरङीफुल सजाएँ
हामी लुकामारी खेल्ने चौतारीको वरिपरि
आज लहलह साकुरा फुलेर पर्खिरहेछ
म त्यही ओइलिएर झरेको फुल तिपेर माला गाँसिरहेछु
तिम्रो आगमनले मभित्र ल्याएको हाँसो र खुशी
अलि अलि गर्दै तिम्रो सुगन्धसँगै टाढिन थालेको छ
दिनहरु तिमी हिड्सदक र गोरेटो हेरेरै बिते
तिमीलाइ हृदय भरि तस्बिर कोरेर सजाएँ
म सपनीमा कैयौ पल्ट झस्के तिमीलाई भेटेर
रातहरु छट्पटिएर पीडामा परिणत भए
हृदयको हरेक ढोका खुल्ला छ स्वागतको लागि
धेरै पल्ट खुल्यो .........सम्झनाले ढुखेर
तिम्रो यादले कति पोले कति आँसु बगे
न त बिर्सिएर बिर्सिन सक्ने भएँ
न सम्झिएर मनै बुझ्ने भयो
सम्झनाले सताइरहन्छ ..... जलाइरहन्छ ..... !
मिरमिरे देखि झपक्क साँझसम्म
तिमी हिंड्ने बाटोहरुमा
ओहोर दोहोर गरिरहन्छु
धेरै वर्ष साकुरा फुले, झरे
नयाँ पलाए फेरि फुले झरे
ह्र्दय दुख्छ ह्जारौ पटक
रक्ताम्य भएर फुटे, टुटे
छताछुल्ल पोखिन्दा आफुले आफैलै सम्हाले
अस्ति तिमी जस्तै हु बहु चन्चल, लजालु देखे
पातलो ओठ, तिलको कोठी, स्याउ जस्तो गाला
हावाको झोक्कामा फर-फरिएको कालो लामो केस
इन्द्रेनीको मुस्कान, गुलाबी मीठा ओठ
आशा र बिस्वासमा कैयौ बर्ष आँखा बिच्छ्याएर पर्खे
रातहरु पिडामा छट्पटिन्दै मडारिन्दा सम्झनमा बिते
तिम्रो अनुपस्थितीले मेरो गन्तब्य टुक्रिन थालेको छ
म सहाराबिहीन जिउदो लास झै जिएको छु
मैले दिन अनि रात पर्खि बसे
न रात भर एक झलक निन्द्रा नै आयो
न तिमी नै आयौ
अन्धकारको छ्ट्पटिले तडपाईरहयो........ जलाइरहयो ।
खुशीले मुस्काएर बोलेको त्यो दिन
पहिलो भेटमा उपहार गुलदानी दिएको त्यो पल
हेरन सदा झै साकुरा फुले ओइलिएर झरे
वर्षमा खहरेहरु पनि उर्लिए सुसाए केही पल
नयाँ दुलही झै वारिपाखा पारिपाखा फुले झुले
तिमी हिड्ने बाटोहरु सप्तरङी फूलले सजाई राखे
जाने बेलामा जान्छु नभनी गयौ मलाई के थाहा?
अचम्म मानेर हेर्यौ
आँखा रसाएक थिए, मुटु ढुखे जस्तै
यता उता हेरी अनकनाइरहयौ
केही भुलेकी जस्तै गरेर
त्यो दिन तिनीले माला छाडेको भए, पत्र कोरेको भए
ऐनामा हेरेको भए, भित्ताभरि तस्बिर कोरेको भए
अबस्य तिमी फर्किएर आउने थियौ
तर केही छुटेनछ ?
एक्लै एकान्तमा बाटोभरी आउँचौ भनेर पर्खिरहे
पागल झै छट्पटिन्दै
आश्थाको दियो बालिरहे
बर्षौ बर्ष म तिमीलाई पर्खिरहेछु
बिश्वास अमर छ अझै
दिन अनि रात सम्झिरह्न्छु
याद अझै आलै छ
सपनीमा बिउझाउछ्यौ कि भनी
म ननिदाई - ननिदाई पर्खिरहेछु
कल्पनामा छल्किन्दै पोखिन्दा कति आँसु बगे
मेरो जिन्दगी दिनप्रति दिन यसरी नै बितिरहेछ
मुटुमा बाण लागे झै धुखिरहन्छ पोलिरहन्छ
न तिमी नै आयौ न त सपनीमा बोलायौ
तिम्रो सम्झनाले सताइरहन्छ जलाइरहन्छ
तिमी आउँछ्यौ भनेर ।
-देव राज आचार्य
''कहाँ जाँदै छस् ए राम भरोष ?''
''आँप बेच्न गैरहेको छु हजूर। आज बजारको दिन हो।''
मध्य तराईको एउटा भित्री गाउँ, धुलाम्मे सड़क। असारको चिलचिलाउदो घाम र लुकामारी खेल्दो बादल, त्यसकै छाता ओढी टाउकोमा एक ढाकी आँप बोकी ऊ बजार जाँदो छ । चप्पलबिहीन घामले डढेका उसका गोडा, च्यातिएको गन्जीबाट बाहिर हेर्न खोजिरहेका पिठ्यू र निधारभरी असरल्ल पसिना बोक्दै ऊ हिडिरहेको छ । गम्छाको बिडिया माथि ढाकी अडीरहदा बेला-बेलामा ऊ दुई हातले खैनी मोल्न भ्याउछ ।
साँझको बेला। उसकी श्रीमती रोटी पकाऊँदै छे। केटाकेटीहरु आँगनमा खेल्दैछन् ।
''राम्रो भाउमा बेच्नु भो?''
''अँ बेचें ।''
''दबाई ल्याउनु भो त ?''
''ल्याएँ । यी भिटामिनको शीशी । डाक्टरले भनेको यसले तागत दिन्छ रे।''
श्रीमतीको अनुहार एक्कासी उज्यालो भयो । खाना खाईसके पछि उसले आँफै भिटामिनको शीशी खोली र उसलाई ख्वाइदी ।
Posted by डिआर निश्छल at 8:42 PM 1 comment:
मेरो मनको रोशनी
प्रेमको दियो बाले त्यहाँ
निभेर जाने डर भयो
मन्द-मन्द हावा चल्यो
अशान्तिको राँको बल्ला
भन्ने डर भयो ।
सकिदै गयो प्यालामा तेल
कमजोर हुदै गयो रोशनीको
अध्याँरोमा मेल ।
सकिदै गएछ कपासको सलेदो
निभ्न लागेछ दियो
तेल थप्ने प्रयास गरेँ अत्तालिदै
थोरै समय हावा रोकियो
मनमा केही शान्ति मिल्यो
उज्यालो सन्सार पाउनेलाई ।
मनमा तुफान चल्यो
तेल थप्न पाएकोमा
थोरै आशा पलायो
दियो झै बाल्न
तर यो परेछ कृतिम्
त्यसैले सकिन बचाउन
चारै तिरको कुदृष्टि पर्‍यो
चुम्न चाह्यो साराले
लाग्यो मनमनै कसैलाई
मन परेन उज्यालो
आखिरी म हारेरै छाडेँ
हराएर गयो मेरो मनको रोशनी ।
सारा सन्सार चिहाएर हेरेँ
पुन: दियो जलाउने
बज्यो सकिएछ समय
यतिक्कैमा मन बुझाएँ
चाहिन पुन: जलाउन
मेरो मनको रोशनी ।
-लेखगाउँ -४, उदयपुर
Posted by डिआर निश्छल at 2:25 AM No comments:
तिमीलाई बधाई छ
सन्तान प्राप्तीको कोटी कोटी
बधाई छ तिमीलाई,
हकहरु कैदी हुदा
मान्छे भित्रको मानबता खोज्न
कफन बाधेर मोर्चाहरुमा
तिमीले जसरी जल्लादहरुलाई पछारेर
नौलो बिहानी ल्यायौ
त्यसरी नै तिम्रो कोखबाट
अर्को सूर्य उदाएको छ ।
तिम्रो काखको त्यो सूर्य
मदन भण्डारी बनेर चम्कोस् भोलि
बिपि बनी उज्यालियोस् मनहरुमा
नेल्सन मन्डेला बनी छाओस् ब्रम्हाण्डमा ।
तर फूलमाया !
जिसस सङ्ग प्रार्थना गरौ
बेथितिको साढे नार्ने प्रचन्ड जस्तो
परिबर्तनको बाटो छेक्ने माधब जस्तो
यथास्थितिको पाउ चाट्ने गिरिजा जस्तो ।
बरु फूलमाया !
अक्करमा ढाकर बिसाएर
टोक्माको टेको लगाउदै
पसिनाको तृष्णा मेट्ने
पौरखी भरिया बनोस्
मानो रोपेर मुरी फलाउने
श्रमजिबी किसान बनोस्
साच्चै नै तिमी र म
माधब र प्रचण्ड हुन नपरोस्
हुन नपरोस् गिरिजा प्रसाद पनि
फेरि पनि तिमीलाई
सन्तान सुखको कोटी कोटी बधाई छ ।
Posted by डिआर निश्छल at 1:01 AM No comments:
चुपचाप सधैं बस्नु हुन्न जंगे पिलर ढाले पछि
गर्दा गर्दै अलिअलि सबै 'मेरै' भन्न बेर छैन
सिमानाको ढुंगो सारी त्यही कुकुर पाले पछि
मन्त्री,प्रधानमन्त्री सबै रमिते भो खै किन आज
अठारौ शताब्दीको नारी झै शीरमा सिन्दुर हाले पछि
लुतेलाम्रे भनी हेपेका हौला 'गगन' लाई ए सधियार !
बलभद्र, भक्तीको याद आउँला दिउसै बत्ती बाले पछि
Posted by डिआर निश्छल at 12:15 AM No comments:
(ख्याती श्रेष्ठको सम्झनामा)
खोलामा बग्यो सपना ।
पहिरोले छाती लग्यो
र आँसु झार्यो पहाडले
मन डढेर खरानी भयो
र समुन्द्रमा खस्यो घाम
तार चुँडियो सारङ्गीको
र बन्द भयो जीवनगीत
जुवाडेहरुले राम्ररी बुझून्-
जुवाघरमा बिक्री हुने मुस्कान जस्तो
सस्तो हुँदैन सपना
मेचमाथिका मान्छेहरुले पनि बुझून्-
सांसद खरिद जस्तो
सस्तो हुँदैन सपना ।
मर्नु पर्छ नै भने खुट्टा तान्नु किन?
छताछुल्ल फुकेर हुन्छ भने बान्नु किन?
ज्यानै दिदा पनि खुट्टा तान्दै हिड्छ भने
पाप लाग्छ त्यसलाई आफ्नो मान्नु किन?
नैतिकतालाई धरौटीमा राख्नेहरुले नि
ज्युदो लाशको भारीतारी धान्नु किन?
जति गोली हाने पनि मुसो नमार्नेले
जथाभावी गोली बारुद हान्नु किन ?
अनेसास, मलेसिया शाखा
- सुमन पोखरेल
निचोरेर प्रेयमै पोखूँ भैरहेकै हो,
हृदयकै रङले कोरूँ भैरहेकै हो।
यो ताजमहल अगाडि
सूर्यकिरणले लजाइरहेका सङ्गमरमरका मुस्कानहरू,
रङ्गीन अनुभूतिका सुवासित मादकतामा लठ्ठिएर
म, आफूलाई बिर्सिरहेको छु।
वा सम्झिरहेछु आफैँलाई,
अचेत छु, आफ्नै छातीको फैलाहटले पुरिएर।
प्रेमलाई धर्म बनाइदियो।
प्रेमिकाको मृत्यु पर्खने थिइनँ।